Izixhobo Zokuchumisa, Imveliso yeMveliso yeSichumiso-YiZheng
Sibonelela ngezisombululo zizonke zenkqubo
Umgca wemveliso yesichumiso somzimba
Zhengzhou Yizheng Heavy Machinery Equipment Co., Ltd.zhongxiang ibekwe kwipaki mveliso entshona Zhengzhou, kwiphondo Henan, ligxininisa kuphando nophuhliso kwezolimo ukhuselo lokusingqongileyo, uphando kunye nophuhliso kunye nokuveliswa kwezixhobo zokurisayikilisha inkunkuma, BB isichumiso iiseti ngokupheleleyo izixhobo, izixhobo isichumiso organic, umgca wemveliso isichumiso organic izixhobo zophando kunye nophuhliso kunye nemveliso. Sinamandla ophando kunye nophuhliso kunye namandla emveliso. Ukubonelela abathengi ngenkqubo yoyilo, ukuveliswa kwezixhobo zesichumiso, ukufaka, ukuvavanya, ukuxhasa inkonzo enye ebanzi.
Nika yonke indawo yokwenza isichumiso
Yenza isichumiso seOganic ekhaya
Uyenza njani iNkunkuma? Ukuvundiswa kwenkunkuma yendalo kuyafuneka kwaye akunakuphepheka xa amakhaya esenza isichumiso ekhaya. Inkunkuma yokufaka umgquba ikwayindlela efanelekileyo neyoqoqosho kulawulo lwenkunkuma yemfuyo. Kukho iindidi ezimbini zeendlela zokugalela umgquba ezifumanekayo ekhaya kwizichumiso eziphilayo ...
Qalisa iprojekthi yakho yemveliso yezichumiso
INGXELO YOBOMI Kule mihla, ukuqala kwemveliso yemveliso yezichumiso ephantsi kwesikhokelo sesicwangciso esifanelekileyo seshishini kunokuphucula ukubonelelwa kwesichumiso esingonakalisiyo kumafama, kwaye kufunyaniswe ukuba izibonelelo zokusebenzisa isichumiso sezinto eziphilayo zingaphezulu kakhulu kweendleko zokusekwa kwezityalo zezityalo, hayi ...
Umgquba weegusha ukuya kwiteknoloji yeOrganic Yokwenza iTekhnoloji
Zininzi iifama zeegusha e-Australia, New Zealand, America, England, France, Canada nakwamanye amazwe amaninzi. Ewe ivelisa umgquba weegusha omninzi. Zizinto ezilungileyo zokuvelisa isichumiso semveliso. Ngoba? Umgangatho womgquba weegusha ngowokuqala kwimfuyo. ...
Okokuqala, umgquba wenkukhu eluhlaza awulingani nesichumiso sezinto eziphilayo. Isichumiso sendalo sibhekisa kwindiza, ikeyiki, umgquba wemfuyo, intsalela yamakhowa kunye nezinye izinto ezingafunekiyo ngokubola, ukubila kunye nokulungiswa kwenzelwa isichumiso. Umgquba wezilwanyana yenye yezinto eziluhlaza ...
Ityathanga lomgubo weplate yokujika ityibilika kwinkqubo yokubola yenkunkuma yendalo. Kulula ukusebenza kwaye inentsebenzo enkulu, ke esi sixhobo somgquba sisetyenziswa ngokubanzi hayi kwizityalo zokuvelisa isichumisi, kodwa nakwicomposting yefama. Uvavanyo ngaphambi kokwenza uvavanyo run ...
WENZA NJANI UKHETHO LWENKQUBO YOKUTYALA YONYAKA
Uphando lwezixhobo ezingafunekiyo ngenxa yesichumiso semichiza esisetyenziswe kwixesha elide, umxholo wezinto eziphilayo emhlabeni unciphisa ngaphandle kokuthintela isichumiso. Eyona njongo iphambili yezityalo zezichumiso zezinto eziphilayo kukuvelisa isichumiso somgquba ...
Ukulawulwa kwemeko yemveliso yezichumiso zezinto eziphilayo, xa kusenziwa, kukudibana kwepropathi ebonakalayo kunye neyebhayoloji kwinkqubo yemfumba yomgquba. Kwelinye icala, imeko yolawulo iyanxibelelana kwaye ilungelelaniswe. Kwelinye icala, iifestile ezahlukeneyo zixutywe kunye, ngenxa yokuntywila ...
Ungawukhetha njani umatshini wokujika umquba?
Ngexesha lenkqubo yokuvelisa isichumiso semveliso yezichumiso, kukho isixhobo esibalulekileyo esidlala indima ebalulekileyo kwinqanaba lokuvundiswa kwenkunkuma yendalo- umatshini wokujika umquba, besinokwazisa ngolwazi olusisiseko malunga nokujika komgquba, kubandakanya imisebenzi yayo, iintlobo kunye nendlela yokukhetha a. ..
Nangona ukufuya iinkukhu kuye kwanda ekuthandeni e-Afrika kule minyaka idlulileyo, ibiyinto encinci. Kule minyaka imbalwa idlulileyo, nangona kunjalo, ibe yinto ebaluleke kakhulu, oosomashishini abancinci abaninzi bejolise kwinzala enomtsalane. Izinkukhu zeenkukhu ze-ove ...
INDLELA yokuvelisa izichumisi zendalo ezivela kwinkunkuma yokutya?
Ukulahlwa kwenkunkuma kuye kwanda njengoko abantu behlabathi bekhulile kwaye nezixeko zikhule ngobukhulu. Izigidi zeetoni zokutya ziphoswa kwinkunkuma kwihlabathi liphela minyaka le. Phantse i-30% yeziqhamo zehlabathi, imifuno, iinkozo, inyama kunye nokutya okuhlanganisiweyo kuyalahlwa minyaka le ....
Sebenzisa inkunkuma yemfuyo ukuvelisa isichumiso sezinto eziphilayo
Unyango olusengqiqweni kunye nokusetyenziswa okufanelekileyo kwemanyolo yemfuyo kungazisa ingeniso ebonakalayo kuninzi lwamafama, kodwa kukwanyusa ukuphucula ishishini labo. Isichumiso se-organic sendalo luhlobo lwesichumisi kunye nemisebenzi yesichumiso se-microbial kunye ne-organic f ...
Icebo lokucoca ulwelo lokuCoca kunye neMolasses Inkqubo yokwenza isichumisi
I-akhawunti yeSucrose ye-65-70% yemveliso yeswekile yehlabathi. Inkqubo yemveliso ifuna umphunga nombane omninzi, kwaye ivelisa intsalela kumanqanaba ahlukeneyo emveliso ngaxeshanye. Imeko yeSucrose yokuvelisa emhlabeni kungaphezulu kwekhulu lamazwe ...
Sebenzisa ngokufanelekileyo izichumisi zemichiza
Izichumisi zemichiza ziveliswa ngokwenziwa kwizinto ezingaphiliyo, zizinto ezinikezela ngezinto ezinesondlo ekukhuleni kwezityalo ngeendlela zomzimba okanye zemichiza. Izondlo zezichumisi zemichiza Izichumisi zemichiza zityebile kwizondlo ezintathu eziyimfuneko kwipl ...
Umgangatho woLawulo lweZichumiso zeOrganic
Ukulawulwa kwemeko yemveliso yezichumiso eziphilayo, xa kusenziwa, kukunxibelelana kweempawu ezibonakalayo nezendalo kwinkqubo yokwenza umgquba. Kwelinye icala, imeko yolawulo iyanxibelelana kwaye ilungelelaniswe. Kwelinye icala, iifestile ezahlukeneyo zixubene kunye, ngenxa ye-div ...
Ukurisayikilisha kwakhona inkunkuma yentsalela yamakhowa
Kwiminyaka yakutshanje, ngokuphuhliswa kwetekhnoloji yokulima yefungi enokutyiwa, ukwanda okuqhubekayo kwendawo yokutyala kunye nenani elinyukayo leentlobo zokutyala, amakhowa abe sisityalo esibalulekileyo semveliso kwimveliso yezolimo. Kwindawo yokukhula kwamakhowa, inkunkuma eninzi yimfuza ...
Ungawukhetha njani umatshini wokumisa isichumisi
Phambi kokukhetha umatshini wokomisa isichumiso, kufuneka wenze uhlalutyo lokuqala lweemfuno zakho zokomisa: Izithako zamasuntswana: Zithini iimpawu zomzimba xa zimanzi okanye zomile? Yintoni ukuhanjiswa kwegranularity? Inetyhefu, inokutsha, inokubola okanye irashe? Inkqubo ifuna ...
Yenza isichumiso sendalo ekhaya
Xa isichumisi esenziwe ekhaya sisenziwa ekhaya, umgquba wenkunkuma yendalo ubalulekile. Ukuvundisa yindlela efanelekileyo neyoqoqosho yokulahla inkunkuma yemfuyo Zintathu iindidi zeendidi zemfumba: ethe nkqo, isemi-mngxuma, kunye nomngxuma Uhlobo olungqongileyo Ilungele ubushushu obuphezulu, imvula, ukufuma okuphezulu, amanzi aphezulu t ...